अर्डर नम्बर द्वारा पार्सल रूसी पोष्ट कसरी ट्र्याक गर्ने? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
आदेश संख्या अनुसार पार्सल रूसी पोष्ट कसरी ट्रयाक गर्ने?
रूसी पोष्टको आधिकारिक वेबसाइट प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ - तपाईको अर्डर नम्बर लेख्नुहोस् र यदि अर्डर नम्बर देखा पर्‍यो भने (जुन प्रायः केस हुँदैन), त्यसोभए तपाईं शिपिंग मार्ग ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ। यो भयो कि प्याकेज यस जानकारीको आधारमा मुद्दाको विन्दुमा आएको हो, तर नोटिस लिइएको छैन। त्यसोभए तपाईले पोष्ट अफिसमा नम्बर देखाउन सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूले घटनास्थलमा सूचना जारी गर्नेछन्, र भरे पछि तपाई प्याकेज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
पहिले तपाईंले आफ्नो प्याकेजको ट्र्याक नम्बर फेला पार्न आवश्यक छ, यो यहाँ सूचीबद्ध छ:
त्यसोभए यो लिंकलाई पछ्याउनुहोस् र तपाईंको नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् (तपाईं ठाउँ सहित केही प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ)। साइट तपाईंलाई आवश्यक जानकारी दिनेछ।
तपाईं यो साइटमा दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईं आफ्नो पार्सलको बारेमा सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यो पार्सल हराएको छ। त्यहाँ तपाईं उद्धृत गर्न सक्नुहुनेछ; उद्धरण घोषणा गर्नुहोस्; प्याकेज चाहियो।
रूसी पोष्ट वेबसाइटमा जानुहोस्, त्यहाँ एउटा विन्डो छ, तपाईंको अर्डर नम्बर चालित छ (प्रविष्ट गरिएको), त्यसपछि ठीक बटन, र सम्पूर्ण मार्ग प्रदर्शित हुन्छ जब, कहाँ, र तपाईंको प्याकेज कहाँ छ। त्यसोभए यो रेजिष्टर्ड पत्रहरूको साथ हो। राम्रो सोच्नुहोस्, र त्यसपछि त्यहाँ पर्याप्त पोष्टमेन्टहरू छैनन्, मेलबक्सहरूमा सूचनाहरू कुर्दैन। र ताली बजाउनुहोस् - हेर्नुहोस् के भयो, तपाईंको हातमा अर्डर नम्बर लिनुहोस् र हुलाक कार्यालयमा जानुहोस्-)
हुलाक कार्यालयबाट पार्सल पठाउँदा, प्रत्येक पार्सलको आफ्नै ट्र्याक नम्बर हुन्छ, जुन प्रेषकबाट प्राप्त गर्न पर्याप्त छ र रूसको पोस्ट साइटमा प्रविष्ट गर्नका लागि पर्याप्त छ।
तलको चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि मेल अझै छिटो रेसि। गर्दै छ, पार्सलले प्रस्थान शहर छोडे तर हामी समयसीमा भित्रै रहेका छौं। आधुनिक समाजको लागि धेरै सुविधाजनक। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
अहिले वेबसाइट रूसको नयाँ मेल यो धेरै सरल र अधिक पहुँचयोग्य भएको छ, र त्यसैले तपाईं यसलाई पहिले तपाईंको सामान ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ वा मेलको विभिन्न विकल्पहरूमा तपाईंको प्याकेज फेला पार्ने सम्भावनाको बारेमा पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ।
रूसी पोष्टको आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस्, ट्र्याक अर्डर मेनू चयन गर्नुहोस्, तपाईंको अर्डर नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईंले एउटा प्लेट देख्नुहुनेछ जहाँ तपाईंको पार्सलका सबै चालहरू दर्ता छन्। असुविधा मात्र हो कि प्रविष्टि वास्तविक बसाई भन्दा थोरै पछि गरिन्छ।
म दुई साइटहरू प्रयोग गर्दछु: उद्धरण; पार्सल कहाँ छ;, उद्धरण; रूसी पोष्टकोट; पहिलोमा, सबै कुरा धेरै सुविधाजनक र बुझ्न सकिने हुन्छ, तपाईं केवल विन्डोमा ट्र्याक नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र उद्धरण क्लिक गर्नुहोस्; केही सेकेन्ड पछि तपाईंले पहिले नै सम्पूर्ण प्रेषण मार्ग देख्नुहुनेछ। दोस्रोमा, उही प्रणाली, तर तपाईं अझै क्याप्चा प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। मेरो आफ्नै अनुभवबाट म भन्न सक्दछु कि कहिलेकाँही यो हुन्छ कि एक वा अन्य साइटले जहिले हालको स्थान प्रदर्शन गर्दैन, वा दुबै, साइट कोटमा BUT; जहाँ प्याकेज उद्धरण गरिएको छ; जानकारी जे भए पनि छिटो देखा पर्दछ।
हाम्रो समय मा अर्डर नम्बर द्वारा रूसी पोष्ट द्वारा एक पार्सल ट्र्याकिंग धेरै सरल छ। यदि तपाईंसँग इन्टरनेट छ, तर यो पक्कै पनि हो, किनकी तपाईंले यो प्रश्न सोध्नुभयो भने, त्यसोभए तपाईं कुनै एक साइटको सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यस्ता साइटहरू एक दर्जन डाइम छन्। म तिनीहरू मध्ये केही ल्याउन सक्छ।
पहिलो हो gdeposylka। पृष्ठको बिचमा त्यहाँ खोजी बार छ। नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईं यो पार्सलको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
दोस्रो - रूसी पोष्ट साइट।
तेस्रो - अर्को साइट।
र म यो सेवा पनि मनपराउँदछु जहाँ तपाईं दर्ता गर्न र ट्र्याक नम्बर प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र जब तपाईंको प्याकेजको प्रमोशनमा परिवर्तन हुन्छ, तपाईंले एउटा सूचना सन्देश (ईमेल) प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहाँ तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ।
पार्सल पठाए पछि, म यसको आन्दोलनको अनुसरण गर्दछु। सूचनामा त्यहाँ पार्सल नम्बर छ, हामी यसलाई रूसी पोष्ट र अर्को कोडको साथमा वेबसाइटमा विन्डोमा ड्राइभ गर्छौं, त्यसपछि हामी फेन्ड बटन थिच्दछौं र यसको स्थान हेर्छौं।
सामान्यतया, सँधै ढिलो जानकारी हुन्छ, जब मैले यो पठाएको थिएँ, म अझै पनि बाटोमा साइटमा झुण्डिरहेको थिएँ, र मेरी बहिनीले मलाई प्याकेज प्राप्त भएको भनी बोलाए र केही दिन पछि मैले त्यसलाई साइटमा परिवर्तन गरें, हुनसक्छ साताको अन्त्यमा पनि यसले असर गर्यो।
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,372 प्रश्नहरू।